Landa izindaba ze-Instagram IOS ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Landa izindaba ze-iOS Instagram
Januwari 28, 2019 0 Comentarios 1447
Kusukela ukuhlanganiswa kwe- “Izindaba ze-Instagram”(Izindaba ze-Instagram), ngokususelwa kunqubo ye-Snapchat, le nethiwekhi yokuxhumana nabantu izuze abasebenzisi abaningi nsuku zonke. Inani labantu abasebenza kulolu hlelo lokusebenza, ene-Facebook, uyenze yaba enye yamanethiwekhi ajwayelekile kakhulu okwamanje. Ukuthandwa kwayo kukhuphuke njengogwebu, ngenxa yayo izibuyekezo ezinhle. Uma ungumsebenzisi weplatifomu, kungenzeka ukuthi ukuhamba ezindabeni zoxhumana nabo, abanye bakubize ukunaka kwakho futhi bafuna ukubabona futhi noma kwesinye isikhathi uye uhlangane nabanye ofuna ukuzisindisa ngakho. Ngakho-ke, landa izindaba ze-Instagram kusuka ku-iOS (lolu uhlelo olusebenzayo lweselula yakho), izokuvumela ukuthi ufeze umsebenzi wakho.
Ukulanda izindaba ezivela ku-Instagram iOS kuyindlela ebabazekayo namuhla, abasebenzisi abaningi kakhulu bafuna gcina bese uphinda okuqukethwe kusuka kubangani bakho nakubalandeli, ngaphandle kokulinda omunye umuntu ukuthi adlulise izithombe namavidiyo owathandile.
Zithini izindaba ze-Instagram?
Bayisici se-Instagram esikuvumela ukuthi wabelane nomhlaba ngalokho okwenzayo, ngaphandle kokuthi wenze izincwadi zendabuko. Yize izindaba ze-Instagram zingezesikhashana, futhi ngosuku bazobe sebesenyamalele, ngoba okugcina amahora we-24 kuphela, asetshenziswa kakhulu ngabantu ukuhlanganyela ingxenye yosuku lwabo nabangane babo. Ungalayisha izithombe zombili futhi videos, futhi njengoba ungeza okuqukethwe okwengeziwe, zizovela ndawonye njengokulandelana kwama-movie Lokho kuzokwakha udaba lwakho.
Ngezindaba ze-Instagram ungabumba ngendlela oyifunayo, usebenzisa amathuluzi wokudweba nemibhalo. Umkhawulo wendaba yansuku zonke Kukalwa ngesikhathi, ngesilinganiso esingu- Imizuzwana engu-15 ngomlando futhi Imizuzu ye-25 isiyonke ngabasebenzisi. Ngemuva kwamahora we-24, okuqukethwe ngeke kuphinde kuboniswe kuphrofayela yakho noma esigabeni esikhulu.
Ungazibona kanjani izindaba ze-Instagram abangani bakho abazishicilela?
Kumele uthephe esithombeni sakho sephrofayili bese uhlola ukuthi unayo zungeza. Ngale ndlela uzokwazi uma kunezindaba ezintsha ezitholakalayo. Ngokufanayo lapho ufaka i-Instagram ungabona kubha ephezulu yefayela le- isigaba esikhulu Uma othile ahlanganyele izindaba.
Ngabe ubukeza izindaba ezingakanani Instagram ungakwazi yima, emuva naphambili noma kunini lapho ufuna ukusebenzisa umunwe wakho, futhi ubheke nezindaba zomunye othintana naye. Kepha-ke, kubalulekile ukugqamisa ukuthi ngeke ukwazi ukukhombisa ukuthi uyathanda noma ubeka amazwana ku Izindaba ze-Instagram.
Ungalanda kanjani izindaba ze-Instagram kusuka ku-iOS?
Manje, uma sesazi ukuthi zithini izindaba ze-Instagram futhi sifunde ukuthi ungazibona kanjani lezo zoxhumana nabo, sikulungele ukulanda izindaba ze-iOS Instagram.
Uma ungumnikazi we iPhone noma a iPad, futhi ufuna ukulanda okuqukethwe kwakho noma komunye umsebenzisi, kuzodingeka usebenzise a uhlelo lwangaphandle, ngoba akunakwenzeka ngqo kusuka endaweni yesikhulumi ye-Instagram. Kulula kakhulu futhi ngeke kukuthathe isikhathi eside.
Kunezinketho ezimbili zokulanda, kepha ekugcineni zikhiqiza Umphumela ofanayo.
Ungangena kusuka kwisiphequluli sakho seSafari, uhlobo lwesitolo sohlelo lokusebenza lwesiShayina esibizwa I-Tutuapp. Lapho usuvele ngaphakathi, landa uhlobo lwamahhala ngokuchofoza inkinobho "Okuvamile" futhi ngemuva "Landa".
Futhi unethuba lokuvula i-AppStore bese uthayipha injini yokusesha "Umlandeli Wendaba", khetha uhlelo bese uqala ukulanda.
Ngokukhetha kweTutuapp, kufanele ulinde ukulanda ukuqeda. Uma usulungile, iya ku "Izilungiselelo", cindezela "Okuvamile" bese ubheka inketho "Gi-stion yamadivayisi ", lapho, cindezela "I-Trust Beijing Nation Sky Network Technologies". Yamukela izimvume ngokucindezela "Themba" futhi siphume ukubuyela esitolo. Manje, sibhala enjini yokusesha "Instagram + +", yikhethe bese ukulanda kuqala.
Lapho ukulanda kwesibili sekuqediwe, uzofinyelela ubuqiniso bakho bese ubona lokho isikhombikubona okufanayo kuya kwa- Instagram, umehluko wokuthi lolu hlelo luqukethe izikhangiso. Kodwa-ke, njengoba uzosebenzisa yona kuphela download izindaba ze-iOS Instagram, ngeke kucasule kakhulu.
Lapho lolu hlu selulandiwe, kufanele ufake uhlelo lokusebenza, uhlole imigomo yokusebenzisa bese uyamukela.
Gcina izindaba zakho ze-Instagram
Lesi sinyathelo sokugcina, ngokungafani nesangaphambili, es okufanayo kuzo zombili izinkonzo. Okusafanele kwenziwe ukusesha umsebenzisi futhi ngaphakathi kwendaba yabo ukhethe isithombe noma ividiyo oyifunayo. Bese ucindezela isithonjana somcibisholo ngaphezulu kwesokudla. Ekugcineni, uhlelo luzokubuza ufuna ukulanda kuphi futhi ngosayizi othile, siyayikhetha futhi yikho. Uma ubuyekeza ubuhle bezithombe kwi-iPhone yakho noma i-iPad, kuzovela ifayela olilandile. Ungakwenza lokhu kaningi ngendlela oyifunayo nangakho konke okudingayo.
1 Zithini izindaba ze-Instagram?
2 Ungazibona kanjani izindaba ze-Instagram abangani bakho abazishicilela?
3 Ungalanda kanjani izindaba ze-Instagram kusuka ku-iOS?
3.2 Landa futhi
3.4 Gcina izindaba zakho ze-Instagram
Ungazithenga kanjani futhi kuphi izihloko ze-SEO zebhulogi lakho?
Landa Izindaba Ze-Instagram